Adobe dia miasa amin'ny "Photoshop of audio" | Famoronana an-tserasera
Adobe dia miasa amin'ny «Photoshop for audio»
Andro vitsivitsy izay izay Adobe nandray andraikitra lehibe amin'ny alàlan'ny fandefasana fampiharana finday vaovao telo izay mifantoka amin'ny tanjona maro samihafa. Izay ahafahanao mamorona layout, manao ahoana ny Comp CC; hafa toa Photoshop Fix, hamerenana ireo tarehy ireo sy hanovana azy ireo mba hanatsarana azy ireo fotsiny; Y sketsa photoshop, ho an'ny sary freehand ahafahanao maneho ny tenanao araka izay itiavanao azy.
Tsy nijanona tamin'ny famoahana fampiharana sy fampisehoana karazana vokatra hafa fotsiny izy io, fa naneho izay izy prototype izay iasanao sy izay eo ambanin'ny anarana hoe Project VoCo. Fandaharana iray izay tsy mitovy amin'ny hafa amin'ity orinasa ity amin'ny alàlan'ny fahaizana mamolavola ny feon'ny olona iray hanoratra indray izay nolazainy.
Izy io dia amin'ny hetsika MAX fanao isan-taona, izay nanehoan'ny Adobe ny sasany amin'ireny tetikasa vaovao iasan'ny ekipa. Ny sasany adala be ary afaka manintona ny ampahany amin'ilay rafitra izay ho nomerika sy endrika mandritra ny taona vitsivitsy, toy ny Photoshop, ary programa maro hafa avy amin'ity orinasa ity.
Tetikasa VoCo, izay nofaritan'ny developer Adobe Zeyu hoe inona manao audio ho an'ny ataon'ny Photoshop amin'ny sarysatria manana ny fahaizana manova kabary na manampy teny aza izay tsy tao anaty rakitra audio tamin'ny voalohany. Midika izany fa raha afaka manampy olona amin'ny tontolo iray amin'ny sary ianao dia ho afaka hanao toy izany koa saingy amin'ny teny tononina.
Adobe dia naneho ilay rindrambaiko tamin'ny alàlan'ny fisie feo iray izay tsindrio fotsiny nisy lahatsoratra nampidirina tao amin'ny saha fanovana izay afaka nanampy ho azy tamin'ny kabary tamina feo mitovy. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia niova ny tena nolazain'ilay olona.
Zeyu dia mitazona izany maharitra 20 minitra feo ka ny motera dia afaka manampy teny vaovao tsara amin'ny clip audio, saingy zavatra tena mahavariana izy io ary mety mampatahotra ihany koa noho ny fanovana azo atao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » maro » Adobe dia miasa amin'ny «Photoshop for audio»
Joan-Albert Lligonya Arrando dia hoy izy:
Valiny tamin'i Joan-Albert LLigonya Arrando
Ilay azo antsoina hoe andriamanitry ny Photoshop na i Kirby Jenner tsotra izao
Lahatsary iray maneho ny fotoana mahakivy indrindra amin'ny fiainana